७७ कि ७५ जिल्ला ? आयोग नै अन्योलमा – Himalaya TV
Home » समाचार » ७७ कि ७५ जिल्ला ? आयोग नै अन्योलमा
७७ कि ७५ जिल्ला ? आयोग नै अन्योलमा
११ श्रावण २०७४, बुधबार ०८:०६
काठमाण्डाै, ११ साउन । सरकारले २१ दिनको समय दिएर गठन भएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले काम सुरु गरेको छ ।
तर, सुरुमै आयोग देशमा ७७ जिल्ला हुने कि ७५ जिल्ला हुने भन्नेमा द्विविधामा परेकोे छ । क्षेत्र निर्धारणका लागि सुझाब लिन छलफलका लागि बोलाएका विज्ञहरूले नै चारथरी सुझाब दिएपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा आयोग नै अलमलमा परेको हो । संविधानले नै जिल्लाबारे प्रस्टता नदिएकाले आयोगका पदाधिकारी र विज्ञहरूले प्रस्ट जवाफ दिन सकेका छैनन् । पहिला जिल्लाको संख्या मिलाएर मात्र क्षेत्र निर्धारणको अन्य काम सुरु गर्ने तयारीमा आयोग लागेको छ ।
आयोगले सोमबार र मंगलबार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणबारे विज्ञहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरेको थियो । तर, छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले ७७ जिल्ला मान्ने कि ७५ जिल्लामै १६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने भन्नेमा प्रस्ट धारणा दिन सकेनन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै भवनमा आयोगको कार्यालय राखिएको छ । आयोग अध्यक्ष कमलनारायण दासबाहेक अन्य सदस्यको कार्यकक्ष अझै बनिसकेका छैन । जसले गर्दा औपचारिक रूपमा काम सुरु गर्न समस्या भएको आयोगका सदस्य माधव अधिकारीले जानकारी दिए ।
जिल्ला कति हुने भन्नेबारे संविधानमै स्पष्टता छैन । संविधानको धारा ५६ को उपधारा ३ मा भनिएको छ– संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका अनुसूची ४ मा उल्लेख भएबमोजिमका जिल्लाहरू रहेका प्रदेश रहनेछन् । अनुसूची ४ मा नवलपरासी र रुकुम जिल्लालाई विभाजित गरिएको छ । अहिले ती जिल्ला दुई–दुईवटा भएका छन् । यसरी हेर्दा ७७ जिल्ला हुन्छ ।
तर, संविधानको २८६ धारामा जिल्लामा कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी बाँकी निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या र भौगोलिक विशिष्टताका आधारमा तय गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीका अनुसार धारा २८६ ले ७५ जिल्लाको परिकल्पना गरेको देखिए पनि धारा ५६ अनुसार भने ७७ जिल्ला कायम हुने देखिन्छ ।आयोग सदस्य माधव अधिकारीले भने आयोगको कार्यालय व्यवस्थापन भइनसकेकाले औपचारिक रूपमा काम आरम्भ नभएको बताए ।
‘केही विज्ञहरूसँग अनौपचारिक छलफल त गरेका छौँ । निर्वाचन क्षेत्रको संख्या नभई नाम राख्ने भन्नेबारेमा विस्तारै छलफल होला, तर अहिले आयोगले अरूको सुझाब लिइरहेको छ, बोलेको छैन,’ अधिकारीले नयाँ पाित्रकासँग भने । संविधानले नै जिल्लाबारे प्रस्टता नदिएकाले आयोगका पदाधिकारी र विज्ञहरुले प्रष्ट जवाफ दिन सकेका छैनन् । पहिला जिल्लाको संख्या मिलाएर मात्र क्षेत्र निर्धारणको अन्य काम सुरु गर्ने तयारीमा आयोग लागेको छ । याे खबर नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।